Published October 15, 2020 at 10:48 PM CDT
Akka gabaafameti namni 61 long-term facility keessaayi, namni 13 northwest Iowa fi namni 4 Woodbury County dabalatee.
Governor Iowa Kim Reynolds akka jetteti wayta presdantiin Donald Trump wayta duula nafiladhu godhuu akka dhukkubni hin baayanef adeemsa maraa akka godhe ni amanti.
Guyyaa harbaa galgala qophiin Des Moines airport manaa olittti ayyaana godhan namni baayen akka irrati argamanii turan gabaasan.
Gov.Reynolds akka jetteti Ummani Iowa karaa nagahaan walitti qabamuu akka dandau himte.
Warri hiriira irra turan akka haguugi fuula hin godhatini hima. Reynolds akka gabaasa mana fayyaa jalatti namni amma nama kudhanii ol wagahuu akka danda’an himan.
Governor South Dakota Kristi Noem har’aa kaampeeni isii magaala New Hampshire goote. Osoo haguugi fuula hin godhatan ummata duratti haasoyte. Osoo state isii dhukkubni kun akka itti guddataa jiru osoo itti mullisa jira. Case ammati qabame nama 7000 yeroo awwlaa keetif south Dakotaa keesati. Hospitaalis yeroo jalqabaati busy taee ture.
Nebraska akka har’a gbaasa kenneteti namni qabame har’a 1000 dha. State guutu keessa amma nebraskaa jahaffaa irra jirti.namni nabaraaska keessati qabame nama 54,000 fi namni 530 dueera.